अक्सिजनमा भद्रगोल : संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेछन्, मन्त्रालय भन्छ ‘व्यवस्थापन ठीक छ’ – Health Post Nepal
२०७८ जेठ ३ गते ९:५३
‘सेवाका नाममा व्यक्तिले उद्योगबाट अक्सिजन सिलिण्डर लैंजादा संस्थागत वितरणमा संकट आयो। अस्पतालको उपचार प्रभावित भयो। सबै गम्भीर बनौं।’
शुक्रबार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा यो ‘स्टाटस’ लेखिरहँदा चीनले दिएका मध्ये ७ वटा सिलिन्डर अक्सिजन सांसद गंगा चौधरीको घरमा राखेको देखिने एउटा भिडियो सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइसकेको थियो।
उनी दाङबाट एमालेकी सांसद हुन्। त्यो भिडियोका बारेमा उनले सञ्चारमाध्यमा भनेकी छिन्– दाङका अस्पतालमा लैजानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याएकी हुँ।
केहीबेरपछि उनले त्यो अक्सिजन दाङको लमही अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिन्।
चीन सरकारले दिएको चार सय अक्सिजन सिलिन्डर उनले विमानस्थलबाटै घरमा लगेर राखेकी थिइन्, दाङ पुर्‍याउनका लागि।
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने दाङ अहिले कोरोनाबाट अत्यन्तै प्रभावित भइरहेको छ। त्यही प्रदेशको नेपालगन्ज र बुटवल थप प्रभावित छन्।
जिल्लामा अक्सिजन अभावले संक्रमितहरूको ज्यान थालेपछि त्यहाँका नागरिकले ‘सांसद हराएको सूचना’ भन्दै जिल्लाबाट निर्वाचित भएका सबै सांसदहरूको नाम र फोन नम्बरहरू सामाजिक सन्जालमा राखेका थिए। र सांसदहरूलाई एसएमएस अभियान पनि चलाएका थिए।
आम नागरिकका एसएमएसहरू मोबाइलमा बज्न थालेपछि केही दिनअघि दाङकै एमालेका सांसदहरू गंगा चौधरी, शान्ता चौधरी र कोमल वलीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
त्यसपछि गंगा चौधरी अक्सिजन लिएर दाङ पुगिन्। शान्ताहरू पनि थप स्वास्थ्य सामग्री लिएर दाङ पुगेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार खासगरी अक्सिजन अभाव चुलिनुका पछाडि तीनवटा समस्याहरूको बारेमा सरकारले विश्लेषण गरेको छ।
तीमध्ये पहिलो त उद्योगहरूले सिलिन्डर भर्ने क्षमता हो।
दोस्रो लिक्विड अक्सिजन भारतबाटै ल्याउनुपर्छ। अनि तेस्रो समस्या भनेको सिलिन्डरहरूको अभाव हो।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएर आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सिसीएमसीको बैठकले यी समस्या समाधानको उपायहरूको बारेमा पनि छलफल गरेको थियो।
बैठकले बन्द रहेका उद्योगहरू पुन: सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र त्यसका लागि सबै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको आयातलाई अझैं बढाउने र त्यसका लागि पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपालमा लिक्विड अक्सिजन भारतको झारखण्डबाट आयात हुन्छ। आफै अक्सिजन अभावसँग जुधिरहेको भारतले केही समयअघिसम्म अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाएको थियो। पछि नेपालले पटक-पटक अनुरोध गरेपछि उसले केही ट्याङ्क अक्सिजन पठाइदियो। भारतमा त्यो निरन्तर आयात भइरहने पनि ज्ञवालीले बताए।
तर उनले छुटाएको एउटा अर्को समस्या के हो भने वितरण र व्यवस्थापनको समस्या। सिसीएमसीले ‘टास्क फोर्स’ नै बनाएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि मन्त्रालय आफैले त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ।
मन्त्रालयले अस्पतालहरूका लागि अक्सिजनको कोटासमेत तोकेको छ। तर कोटाअनुसार पनि अस्पतालहरूले अक्सिजन पाइरहेका छैनन्।
केही दिनअघि ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. सन्तोष पौडेलले आफ्नो अस्पतालमा आउनुपर्ने कोटाकै अक्सिजन पनि प्रहरीका ‘ठूला मान्छे’ले कब्जा गर्न थालेको भनेर लेखेको एउटा स्टाटसका आधारमा मन्त्रालयको खुब आलोचना भएको थियो।
‘हामीले अस्पतालको आवश्यकताअनुसार कति बिरामी छन्? कति चाहिन्छ? त्यो सबै हेरेर कोटा तोकिदिएका हौं’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्त्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ‘सिलिन्डरको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौं। अलिकति समस्या उद्योगहरूको क्षमताको हो। त्यो पनि मिल्दैछ।’
उनका अनुसार अहिले कुनै ठाउँमा चौबिसै घन्टा उद्योग चलिरहेका छन् र पनि सिलिन्डर भर्न हम्मे हम्मे छ भने कुनै ठाउँमा सिलिन्डर नभएर उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेकै छैनन्।
‘जस्तो कि प्रदेश १का उद्योगहरूलाई सिलिन्डर नभएर पूर्ण क्षमतामा चलाउनै सकिएको थिएन। अब हामीसँग सिलिन्डरहरू जम्मा हुँदैछन् र त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ।’
विदेशबाट पनि अहिले अक्सिजनका सिलिन्डहरू सहयोग आइरहेका छन्।
खाडीका नेपालीले पठाएको ६५० सिलिन्डरमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा २००, सुदूरपश्चिममा १००, कर्णाली प्रदेशमा १००, प्रदेश नं २ मा ८५ र गण्डकी प्रदेशमा ७५ थान पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो बाँडफाँडका लागि एनआरएनए उतैबाट सुझाव दिएको खाडीमा सिलिन्डर व्यवस्थापनमा खटिएका एकजना एनआरएनएका प्रतिनिधि दीपजंग शाहले बताए।
‘अवस्था हेरेर हामीले कहाँ कति पठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका थियौं। त्यहीअनुसार मन्त्रालयले बाँडफाँड गरेछ’ उनले भने।
अहिले सांसद, नेता तथा मन्त्रीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउनका लागि मन्त्रालयलाई दबाव दिइरहेका छन्।
जस्तो कि सांसद गंगा चौधरीले मन्त्रालयबाट ६ वटा अक्सिजन सिलिन्डर मागेर दाङको लमही अस्पताललाई दिएकी छिन्।
‘तर हामीले व्यक्त्तिगत रुपमा कसैलाई पनि त्यसरी अक्सिजनका सिलिन्डर बाँडेका छैनौं’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन् ‘हामीले त्यसरी बाँड्दै बाँड्दैनौ। जसले लगेको छ उसैलाई सोध्नुस्। त्यो कसरी लैजानुभो उहाँले!’
चौधरीले पनि लमही अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सिलिन्डर विमानस्थलबाट लैजाने क्रममा गाडी बिग्रिएपछि आफ्नो डेरामा लगेर राखेको र शनिबार राति नै दाङ पुर्‍याएर हस्तान्तरण गरिसकेको बताएकी छिन्।
जिल्लाजिल्लामा नागरिकस्तरबाटै सिलिन्डर संकलन र सहयोग गर्ने अभियानहरू चलिरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीको टोलीले पनि उद्योग, कलकारखाना तथा घरमा अनावश्यक रुपमा राखिएका सिलिन्डरहरू जम्मा गरिरहेको छ।
तर यो सब कहाँ जान्छ?
‘त्यो सब उद्योगमा जान्छ। उद्योगले कुन अस्पताललाई कति आपूर्ति गर्ने हो त्यही सम्झौताअनुसार आपूर्ति गर्दै जान्छ’ मन्त्रालयका प्रवक्त्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ‘अब हामीले व्यक्त्तिगत प्रयोजनका लागि राखिएका सबै सिलिन्डरहरू खिच्छौं। त्यसरी अनावश्यक सिलिन्डर राख्न अहिलेको अवस्थामा मिल्दैन।’
उनका अनुसार जिल्ला जिल्लामा अक्सिजनको वितरणका बारेमा स्थानीय प्रशासनले नियमन गरिरहेको छ। अहिले व्यक्त्तिगत रुपमा लगेका सिलिन्डरमा उद्योगले अक्सिजन भर्दैनन्। त्यसका लागि सिडिओको तोकादेश चाहिन्छ। तर प्रशासनले पनि व्यक्त्तिगत रुपमा दिँदैन।
प्रवक्त्ता गौतमका अनुसार अक्सिजनको आवश्यकता र प्रयोगमा नमिलेको तालमेल चाँडै हट्ने बताउँछन्।
‘हामीले कहाँ के कति आवश्यक छ भनेर नजिकबाटै हेरिरहेका छौं। जिल्ला जिल्लामा पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ’ उनले भने ‘केही कुरा नमिल्नसक्छन् तर व्यवस्थापन हुँदै नभएको भने होइन।’
अहिले अक्सिजन कति चाहिएको हो, कति छ?
यसअघि नेपाली बजारमा ८ देखि ९ हजारको हाराहारीमा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू छरिएका थिए। राजधानी काठमाडौंमा रहेका ८ वटा अनि देशभरि रहेका अरु १४ वटाजति अक्सिजन उद्योगले ती सिलिन्डर भर्ने र बिक्रि गर्दै आएका थिए।
महामारीको दोस्रो लहरले घातक रुप लिँदै गर्दा धेरै संक्रमितलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्न थाल्यो। त्यसपछि उद्योग र सिलिन्डरहरूमा धेरै चासो भयो।
लगेकाहरूले उद्योगमा फिर्तै नदिने भए। घरघरमा मानिसले अक्सिजन राख्न थाले। अस्पतालमा अभाव चुलियो अनि संक्रमितले सासै फेर्न नपाएर प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था आयो।
अहिलेको अवस्थामा लगभग १५ हजार भन्दा धेरै सिलिन्डरको माग छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार अब त्यो समस्या पनि केही दिनमै समाधान हुन्छ।
‘विदेशबाट सहयोग पनि आइरहेको छ। हामीले अरु पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं’ उनले भने ‘केही दिनभित्र यो अभाव पनि अलि कम भएर जानेछ। हामी त्यसैको व्यवस्थापनमा लागेका छौं।’
केही समयअघि चीनले सहयोग गरेको ४ सय सिलिन्डर नेपाल भित्रिसकेको छ। खाडीका नेपालीले त्यहाँ संकलन गरेका करिब ५६० वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि आइतबार एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।
चीन सरकारले दिएको मध्ये १८ हजार सिलिन्डर स्थलमार्गबाट तातोपानी नाकासम्म आइपुगेको छ। थप ५५० सिलिन्डर ल्याउनका लागि नेपाल वायु सेवाले ल्याउँदैछ।
आइतबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १ लाख १० हजार २ सय ६३ सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये जसमध्ये १ लाख २ हजार ४ सय ५५ घरमै छन् भने। ७ हजार ३ सय ६८ जना अस्पतालमा छन्।
चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका लगभग ९८ प्रतिशत संक्रमितलाई अहिले अक्सिजनको आवश्यकता छ। घरमै बसेका संक्रमितमध्ये थोरैलाईमात्रै अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ। किनकि धेरै गम्भिर भएपछि धेरैजसो अस्पतालै पुग्ने गरेका छन्।
यो तथ्याङ्कअनुसार देशभरका अस्पतालमा रहेका लगभग तिनै ७ हजारलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ।
अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरब शारडाका अनुसार अहिले मन्त्रालय, अस्पताल र उद्योगहरूबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको छ।
‘उद्योगबाट बाहिरिएका सिलिन्डर कहाँ जान्छ। उद्योगले आफ्ना सिलिन्डर पाइरहेका छैनन्’ उनले भने ‘मन्त्रालयले एउटा कोटा पठाएको हुन्छ, अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुन्छ। अनि उहाँहरूले धेरै माग गर्नुहुन्छ। हामीले कसरी रिफिल गर्ने?’